Vaovao - Fomba fampidirana ny switch suction varavarana - apetraho irery ny suction varavarana
Fanao fanao mahazatra ny fametrahana a Fiatoana varavarana firaka zinc ao ambadiky ny varavarana. Suction varavarana kely, tsy misy andraikitra kely, afaka misoroka ny varavarana amin'ny fahavoazana tsy ilaina izy io, ny fampiasana miaraka amin'izay dia tena mety
Fomba fametrahana Fiatoana varavarana firaka zinc suction mamaritra ny famolavolana
Voalohany indrindra, mba hanamafisana ny fametrahana ny suction vavahady fidirana dia apetraka amin'ny tany, na apetraka amin'ny rindrina. Hamarino ihany koa ny toerana fametrahana azy manokana, ny habeny ary ny isan'ny habaka avela ambadiky ny varavarana dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny faniriana. Sokafy ny varavarana amin'ny toerana ambony indrindra takiana, andramo ny valiny azo suction varavarana dia mitombina, ny fitrohana ny varavarana amin'ny halaviran'ny varavarana dia mety mba hahitana ny toeran'ny varavarana, apetraka eo akaikin'ny varavarana rehefa tsara, sokafy ny varavarana, andramo ny tena fandidiana dia mitombina, ao anatin'izany ny suction amin'ny varavarana dia kely, na mivoaka kely, ny zoro manokana an'ny suction varavarana.
Farito farito ny toerana, ataovy amin'ny toeran'ny gorodona ny gorodona, tadiavo aloha ny toerana fijanonan'ny varavarana amin'ny pensilihazo amin'ny gorodon'ny gorodona mba hanamafisana ny toeran'ny varavarana, manaova tsipika amin'ny tany miaraka amin'ny pensilihazo, hamafiso aloha ny toerana farany misokatra ny varavarana, ny dingana manaraka hanamafisana ny toerana fametrahana farany ny suction varavarana.
Fomba fametrahana ho an'ny Fiatoana varavarana firaka zinc fametrahana suction manomboka
Ny asa manaraka, dia ny milalao fandavahana herinaratra, amin'ny lavaka fametrahana fantsom-panafody fidirana amin'ny tany. Avy eo apetraho ny faran'ny raikitra ny vavahady suction varavarana, ataovy mafy ny visy etsy ambony, ny fizarana suction varavarana dia mizara ho farany ary ny faran'ny varavarana dia mila manamafy ny visy alohan'ny hametrahana azy, ary avy eo miaraka amin'ny Angle loop anatiny mifatotra. ny sisin-tany dia hapetaka amin'ny tany na amin'ny rindrina. Asa tsara ny manodinkodina ny visy amin'ny tadiny kely Angle anatiny. Tsy misy traikefa mahavita azy. Aorian'ny fanamafisana ny toerana, ny famelezana sy ny fanangonana, ny asa manaraka dia ny fametrahana ny faran'ny fanamboarana amin'ny tany.
Hamafiso ny visy eo ambonin'ny faran'ny fanamboarana miaraka amin'ny gadget ao anaty zoro anatiny ary hapetraka ho azy ny switch suction varavarana. Ny fivoahan'ny suction varavarana dia mifarana eo am-baravarana raha mbola azo fehezina ny visy, ny famindrana jiro mifanaka-baravarana amin'ny faran'ny raikitra dia mbola tsy ilaina ihany koa, maniry ny hametrahana ny varavarana, ny lakile na ny fametrahana ny faran'ny varavarana, ny fomba dia hanokatra ny varavarana voalohany ka hatramin'ny lehibe indrindra, ary avy eo mahita ny toerana marina eo am-baravarana, manamafy ny varavarana faran'ny varavarana amin'ny visy.
Fomba fametrahana Fiatoana varavarana firaka zinc fanitsiana farany suction
Mandamina tsara ny zoro amin'ny faran'ny raikitra ny vavahady suction varavarana ary manenjana azy tanteraka. Ny dingana farany amin'ny fametrahana ny switch suction varavarana dia ny fandefasana tsara. Ny zorony amin'ny fitrohana ny varavarana mihodina dia mifamatotra tanteraka amin'ny faran'ny varavarana sy ny fofona.